Nezvedu - Changzhou Sdpac Co., Ltd.
Changzhou Sdpac Co., Ltd.iri muC5, HUTANG sainzi uye Technology Industrial Park, Guangdian East Road, Changzhou Guta, ine nharaunda ingangoita 10000 m2.
Chiono chekambani ndecheku "shingairira kuvaka zita repasirese rakakurumbira repurasitiki" uye rakagadzira yavo yakasarudzika tsika tsika
"Ona ramangwana, ita chete pail"izano redu rebhizinesi.
Changzhou SDPAC Co, Ltd. ichagadzira akateedzana epamusoro-soro epurasitiki paUS kusangana nezvinodiwa zvevatengi vepamusoro. Nekuvandudzwa kwemidziyo mbishi uye mbishi zvinhu mumusika wepamba, mutengo wekupakisha unogona kuvandudzwa. Kuisa pail kunoita basa rakakosha mukuwedzera kwekunze kuwedzerwa kukosha kwezvigadzirwa. Sechiratidzo chekumusoro-kumagumo kurongedza, mapurasitiki pail ari kugara achichinja iwo maitiro ekurongedza mapaile mumusika. Isu tinonyatso tenda kuti ramangwana repurasitiki pails isimba rine hunyanzvi, uye rinonyatsoratidza yakagadziriswa chigadzirwa nguva.
Kambani yedu yagara ichiisa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza munzvimbo yakakosha mubhizimusi rekuvandudza bhizinesi. Ipo ichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune vatengi, kambani yakazvipira kuchengetedza nharaunda nharaunda kuti ibudirire nekusimudzira. Tichabatanidza manejimendi manejimendi pamwe nevemabhizimusi manejimendi, uye zvishoma nezvishoma kumisikidza nekuvandudza sangano uye mashandiro mashandiro emamiriro ekuchengetedza. Kuchengeta pasi ratiri kurarama, kudzora kusvibiswa uye kuponesa simba ndizvo zvinangwa zvedu zvekusingaperi.
2010 GADZIRA ROUND PAIL A DZAKATEVEDZANA & SQUARE PAIL DZAKATEVEDZANA
2011 DZAKANYUKA ROUND PAIL B DZAKATEVEDZANA
2012 DZIDZA ZVESE PLASTIC UNOGONA
2013 DZIDZIRA STRAIGHT SIDE PAIL
2014 GADZIRA ZVITSAUKO ZVINHU
2015 DZIDZA KUSVIRA REMAHARA & GAMMA LID
2016 DZAKANYUKA ROUND PAIL C DZAKATEVEDZANA
2017 DZAKANYUKA ROUND PAIL D DZAKATEVEDZANA
2018 DZIMWE DZIMWE DZIMWE PASTE UNOGONA DZAKANAKA
2019 GADZIRA ZVINODZIDZWA ZVEMAZUVA & BASEBALL MAPAIL
2020 DZIDZA ZVIPUKA ZVIPUKA